Izitayela zasehlobo: izingubo ezinde ezisikiwe | Bezzia
Izitayela zasehlobo: izingubo ezinde ezinokusikwa okuncane
UMaria vazquez | 19/07/2021 18:00 | Ngigqokani
Kunezingubo eziba ngabalingani abakhulu ehlobo nezingubo esiziphakamisayo namhlanje ziphakathi kwazo. Kunjalo izingubo ezinde ezincane, ngemiklamo lapho kungekho lutho oluheha ukunakwa okungaphezulu kwephethini uqobo lwayo nendwangu eyenziwe ngayo.
Kulolu hlobo lwezingubo ngeke uthole izinto zethrendi ongakuthola kwabanye njengemikhono ekhukhumele, ama-ruffles noma ukusikeka ohlangothini. Kodwa-ke, ngenxa yemichilo yabo emincane namaphethini abo ajwayelekile avulekile, lezi zingubo zizokunikeza induduzo enkulu.
Akunandaba ukuthi zithini izitayela zesizini, izingubo ezinde ezinokusikwa okuncane zihlala zithola indlela yazo yokuqoqa imfashini ehlobo. Ukulula , ngokungangabazeki, leso sici esisenza sibathande kakhulu.
Ukulula kwamaphethini ayo kubenza ucezu olungaphelelwa yisikhathi esingaphendukela kulo unyaka nonyaka singesabi ukukhathala. Uma, ngokungeziwe, sibheja ngemiklamo ngemibala engathathi hlangothi: emhlophe, eluhlaza, beige noma emnyama ... singathola okuningi kukho ngokudlala ngezinsiza.
En ukotini, ilineni, i-viscose noma i-knit engasindi… Izingubo zalolu hlobo zenziwe ngezindwangu ezahlukahlukene. Ama-tino yiwona amasha sha, kepha ashwabana kakhulu kunalawo enziwe kwezinye izindwangu. Uma kungeyona inkinga kuwe, njengoba kungenjalo kimi, zingenye yezindlela ezingcono kakhulu zokubhekana nezinsuku ezishisa kakhulu.
Ukuhlanganisa ingubo nokusika okuncane njengalezi esiziphakamisayo namhlanje kulula kakhulu. Ukuphela kokufanele ukwenze ukufaka ezinye izimbadada eziyisicaba, isikhwama ongasilengisa ehlombe lakho ukuze uthole induduzo enkulu, kanye nesigqoko kanye / noma izingilazi ezikuvikela elangeni.
Izithombe - @mzokoloko, @syabongampungos, @lisonseb, @sibusisiwe, @simphiwe, @simphiwe, @syabongampungos, @sbahle_mpisane, @syabongampungos
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » imfashini » Ngigqokani » Izitayela zasehlobo: izingubo ezinde ezinokusikwa okuncane
Ukudla kwenyanga, ukuthi kuyini nokuthi kusebenza kanjani